Kim Jaejoong JTBC ဗုဒ္ဓဟူးနေ့-ကြာသပတေးနေ့ဒရမ်မာ'Private Life' OST 'Things to Love' music videoကို ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်! - 빵야뉴스
Kim Jaejoong JTBC ဗုဒ္ဓဟူးနေ့-ကြာသပတေးနေ့ဒရမ်မာ'Private Life' OST 'Things to Love' music videoကို ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်!
승인 2020.11.20 18:18
[BBANGYA News | Reporter Nang] JTBC ဗုဒ္ဓဟူးနေ့-ကြာသပတေးနေ့ဒရမ်မာ “Private Life”၏ OST 'Kim Jaejoong - Things to Love' music videoကို ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
'Private Life'သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်မျှဝေခြင်း၊ ခိုးယူခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းခေတ်များ၌ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော လူလိမ်များသည် ကျွမ်းကျင်မှုအားလုံးကို နိုင်ငံ၏ကြီးမားသော 'Private Life'ကို ထုတ်ဖော်သည့် လိမ်လည်မှုဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။
အာရှ၊ ဂျပန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့တွင် legendအဖြစ် လူသိများနေဆဲဖြစ်သော Kim Jaejoong သည် မကြာသေးမီက သူ၏လှုပ်ရှားမှုများကို ထပ်မံကြေငြာခဲ့ပြီး ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ 'Private Life' OST ၏ နောက်ဆုံး အဆိုတော်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက် ညနေ ၆ နာရီတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော “Things to Love” သည် လှည့်စားခံရပြီး လှည့်ဖြားခံနေရသော ကမ္ဘာတွင်ပင် ကျွန်ုပ်တို့မေ့မသွားရမည့် အမှန်တရားနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများ မေးသောသီချင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဤသီချင်း၏ retro bass နှင့် Kim Jaejoong ၏ လူကြိုက်များသော စွဲမက်ဖွယ် အသံနှင့်သဟဇာတဖြစ်မှုဟုဆိုနိုင်ပါသည်။
ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့က “OST ဖြန့်ချိသည့် အချိန်မှစ၍ ပရိသတ်များ စောင့်စားနေသည့် Ju-Jeung စုံတွဲ၏ music video ကို နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သီချင်း၏ စာသားများကဲ့သို့ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တန်ဖိုးထားလေးစားကြသော အတွဲနှစ်ဦးသည် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဇာတ်သိမ်းခြင်းရှိမရှိ အဆုံးတိုင်အောင် အားပေးကြပါလို့ မေတ္တာ ရပ်ခံချင်ပါတယ်။” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
##Private Life ##Kim Jaejoong
Nam Gung-min သည်သူ၏နေ့နှင့်ညအလုပ်သစ်၏ ၃၀ တွင်ပထမဆုံးထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
Emma Stone ဇာတ်ဆောင် 「Cruella」 နှင့် လူဗားရှင်း 「Pinocchio」စသည့် Disney3၏ ဇာတ်လမ်းများတွင် ပါဝင်နိုင်ခြေရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံခြားအနုပညာရှင်များကို Disney ဇာတ်ကောင်များအဖြစ် ပန်းချီရေးဆွဲခဲ့သည်!